Wasiirro iyo Siyaasiyiin ka mid noqday Macaamiisha Shirkadda Caymiska ee TAKAFUL | Salaan Media
Hargeysa (SalaanMedia)- Masuulyiin iyo siyaasiyiin isugu jira Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi iyo qaar hore uga tirsanaan jiray xukuumaddii hore, ayaa shaaca ka qaaday inay si rasmi ah uga mid noqonayaan Macaamiisha Shirkadda Caymiska ee Takaful oo xalay u dabbal-degtay sannad-guuradii 5aad ee ka soo wareegtay xilligii la aasaasay shirkadda.
Masuuliyiinta oo ka hadlay Munaasibad xuska sannadka 5aad ee Takaful loo qaybtay Hotel Ambassador ee Hargeysa, ayaa sheegay in wixii maanta ka dambeeya ka mid noqonayaan macaamiisa ku xidhan adeegyada Caymiska ee shirkaddu bixiso oo isugu jira dhinacyada Caafimaadka, Gaadiidka, Ganacsiga, Dhismaha iyo kuwo kale.
“Anigu In kasta oo aan ka qayb-qaatay bilowgeedii, haddana wali caymiskaa maan gelin, sababtuna waxay ahayd maan haleelaynba. Laakiin laga bilaabo caawa (xalay), aniga iyo qoyskayguba, waanu galaynaa,” Sidaa waxa yidhi Siyaasi Cabdicasiis Samaale, waxaanu intaas ku daray in shirkadda TAKAFUL ku soo kordhisay Somaliland adeegga caymiska oo uu sheegay in si ballaadhan looga isticmaalo adduunka.
Wasiirka Wasaaradda Shaqo-gelinta iyo Arrimaha Bulshada Somaliland Marwo Hinda Jaamac Xirsi oo iyaduna munaasibadda ka hadashay ayaa tilmaantay muhiimadda adeegga Caymisku u leeyahay bulshada oo ay ugu baaqday inay ka faa’idaystaan adeegyada Shirkadda Takaaful, waxaanay madasha ka shaacisay inay ka mid noqonayso macaamiisha shirkadda. qaybaheeda kala
“Dhammaanteen waynu u baahannahay meel aynu dhibaatadeenna kula ciirno. Waxaan leeyahay dhammaanteen inta joogta iyo inta idhegaysanaysaba, aynu ka mid noqonno macaamiisha shirkadda Takaakul oo aan anigu ahay qofka labaad ee Cabdicasiis Samaale ku xiga,” Sidaas ayey tidhi Marwo Hinda Jaamac Xirsi.
Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Jidadka iyo Gaadiidka Cabdilaahi Abokor, ayaa noqday masuulkii saddexaad ee madasha ka shaaciyey inuu ka mid noqonayo macaamiisha Shirkadda Takaful. “Saaxiibkay Cabdicasiis iyo Hinda waxay halkan ka sheegeen inay ka mid noqonayaan macaamiisha shirkadda Takaful Insurance, aniguna waxaan caawa (xalay) halkan ka sheegay inaan noqdo qofkii saddexaad ee ka qayb-gali doona,” Sidaas ayuu yidhi Wasiir Cabdilaahi Abokor.